watchOS 7 inoenderana kubva kuApple Watch Series 3 | Ndinobva mac
watchOS 7 inoenderana senge yeApple Watch Series 3
Nezuro masikati, Apple yakaratidza zviri pamutemo mhando nyowani dzeMacOS, nhamba 10.15 uye yakabhabhatidzwa se Big Sur, WatchOS 7, tvOS 14, iOS 14 uye iPadOS 14. Pazvinhu zvese zvitsva izvi takaburitsa zvinyorwa zvakasiyana zvichikuratidza iyo zvakanyanyisa kukosha. Asi izvo zvinonyanya kukosha kumushandisi, kunyanya pakati pevaya vasingagadzirise gore rega rekushandisa, kuenderana.
Nekusvika kwe macOS Big Sur, iyo vhezheni nyowani ye macOS haichaenderani nayo ese maMac akarova musika muna2012. Izvo hazvireve kuti iwe unomanikidzwa kumutsiridza yako kifaa, kunze kwekunge iwe uchida kunakirwa new uye yakavandudzwa vhezheni iyo ichauya kubva paruoko rwe macOS 10.15. Kana timu ikashandira rimwe gore kana maviri unogona kutambanudza timu.
Kana tikataura nezve kuenderana kweApple Watch, tinoona kuti inotevera vhezheni yeOSOS, nhamba 7, ichaenderana kubva kuChikamu 3. Zviripachena, ese matsva maficha achauya kubva muruoko rwewatchOS 7 haazove achiwanikwa pane ino modhi. Ngatitarisirei kuti kanenge basa rinokutendera kuti uongorore kurara harisi rimwe rawo, nekuti isu parizvino tine zvatinokwanisa kuita zvakasiyana siyana zvinoongorora kurara zvinoenderana neApple Watch Series 1.
Chii chitsva muWatchOS 7
Gore rino, zvinoita senge yapfuura, iyo nhau inosvika kubva kuApple Watch inoshanda sisitimu yakaderedzwa kuita mukana wekutarisa kurara, basa rinochengeta nguva yatiri kugeza maoko edu (kutarisa kuti tinozviita nemazvo) uye mukana we share zvikamu.
Zvichida kuti mukuratidzwa kweApple Watch Series 6, Apple inosanganisira zvimwe zvitsva zvinoshanda kuti hauna kutumira. Iyi ingangoita sarudzo inoongorora ropa okisijeni kuti inyatso tarisa marara evashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » watchOS 7 inoenderana senge yeApple Watch Series 3
Aya ndiwo matsva macOS Big Sur mifananidzo, dhawunorodha
Izvo Rosetta 2.0 uye macOS Big Sur inogona kuita kune vanogadzira